Silicon Power 3D NAND A55 Internal SSD (256GB) with Bracket ~ ICT.com.mm
HomeSilicon Power 3D NAND A55 Internal SSD (256GB) with Bracket
Silicon Power 3D NAND A55 Internal SSD (256GB) with Bracket
Capacity: 256GB Interface: SATA III Form Factor: 2.5″ Read Speed (ATTO): 560 MB/s Read Speed(CDM): 500 MB/s Write Speed(ATTO): 530 MB/s Write Speed(CDM): 450 MB/s Dimensions: 3.94×0.3×2.8 inche Warranty:3Years Loading... [Learn more]
Loading တက်ချိန်၊ ဖိုင်ဖွင့်ချိန်တွေ အရမ်းကြာနေတဲ့ Laptop/ Desktop တွေကို အသစ်တစ်လုံး ဝယ်လိုက်တာထက်တောင်လျင်မြန်သွားစေမဲ့ Silicon Power (SP) အမှတ်တံဆိပ် 3D NAND A55 Internal SSD (256GB) ဖြစ်ပါတယ်။ SATA III SSD အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အမြန်ဆုံး Data Read Speed – 560Mb/s နဲ့ Data Write Speed – 530Mb/s အထိ ရရှိမှာဖြစ်တာကြောင့် တကယ့်ကို မြန်ဆန်တဲ့ ကွန်ပြူတာတစ်လုံးကို အသုံးပြုနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ HDD ရဲ့ ပုံမှန်ဆိုဒ် 2.5” အရွယ်အစားဖြစ်တဲ့အတွက် Laptop တွေအားလုံးမှာ လဲလှယ်တပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Bracket ပါဝင်တဲ့အတွက် Desktop ကွန်ပြူတာတွေမှာလည်း အလွယ်တကူ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အာမခံ သုံးနှစ်အထိ ပေးထားတဲ့အတွက် စိတ်ချလက်ချနဲ့ ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Still wasting precious time while booting your computer or loading applications? Then it's time to get rid of your old hard drive and switch to an SSD. Powered by SATA III 256GB/s interface, the Ace A55 is able to boot your computer or launch applications within seconds.